झापाका पत्रकार शिवाकोटीको संक्रमणका कारण मृत्यु - Baikalpikkhabar
झापाका पत्रकार शिवाकोटीको संक्रमणका कारण मृत्यु
भाद्र ३, दमक / झापाको कमल ५ साविक लखनपुरका स्थायीबासिन्दा पत्रकार गणेश शिवकोटीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । आम्दा अस्पतालमा उपचाररत अन्दाजी ५५ बर्षिया शिवाकोटीको आज ( बिहिबार) साँझ करिब ६ बजे मृत्यु भएको हो ।
उनको उपचारमा संलग्न अस्पतालका डा. नविन ढकालका अनुसार शिवाकोटीले केही समय अघि कोरोना विरुद्धको जोनसोन एण्ड जोनसोन खोप लगाएका थिए । खोप लगाए पनि उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । अथक प्रयासका बाबजुद शिवाकोटीलाई बचाउन नसकिएको हो । डा. नविन ढकालका अनुसार अस्पताल आउँदा नै उहाँ ( गणेश)को छातीमा कडा किसिमको निमोनिया थियो । कोरोना संक्रमणकै कारण बिग्रिएको फोक्सोलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिएन ।
करिब ४/५ दिन अघिमात्रै शिवाकोटी उपचारका लागि सो अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनलाई सघन उपचार कक्षपछि पछिल्लो समय भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइएको थियो । शिवाकोटी दमकस्थित रेडियो झापाका सञ्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा समेत थिए । उनी झापा बाहिर लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय भएपनि दमकमा करिब ३/४ बर्ष अघिदेखि सो एफएमको सञ्चालक तथा निर्देशकका रुपमा रहेका थिए ।
बिहिबार, ०३ भदौ, २०७८, रातीको ०९:०२ बजे
काठमाडौं, १० असोज/ अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न मिस नेपाल...
काठमाडौं ९ असोज/ सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा देशभर...